I-DAMAI VILLA - Indlu yamaFama aseMalay 5km ukuya elunxwemeni.
I-TERATAK DAMAI LANGKAWI yimizuzu esi-8 ngemoto ukuya elunxwemeni, kwiindawo zokutyela nakwindawo yokutyela. Uyoyithanda indawo yethu ukuba ujonge amava akwenyani eMalay Village ahlala kwindawo ehlaziyiweyo eneminyaka eli-130 ubudala yaseLangkawi Malay House of Farmer's House eyakhiwe ngaphakathi kwegadi efihlakeleyo kwi-1.25acre egayiweyo ejikelezwe ngamasimi epaddy, iintaka ezifudukayo, iikati & ubomi basefama. Icocekile, ikhitshi lixhotyiswe ngesitovu segesi, ifriji, itoaster, iketile yombane, isitovu serayisi kunye nezixhobo zokupheka ezilula. Ubukhulu bokulala bungama-6 pax.
Imi kwimizuzu esi-8 ngemoto ukuya kulwandle oludumileyo noluxakekileyo lwaseCenang, eLangkawi eneelwandle ezinesanti emhlophe, iivenkile ezininzi kunye neendawo zokutyela onokukhetha kuzo kunye nemizuzu eli-15 ngemoto ukuya kwisikhululo seenqwelomoya, eTERATAK DAMAI LANGKAWI, iRustic Rural Retreat yakho yindlu yeeNdwendwe kunye nekhaya labucala. kwi-1.25 yeehektare ze-gated compound ejikelezwe ngamasimi e-paddy kunye negadi eyimfihlo eluhlaza kunye neembono zentaba yeMat Cincang ibonelela ngeenyathi zamanzi, ilizwe elivulekileyo kunye neentaka eziselunxwemeni kunye ne-Colugo yasebusuku okanye i-Flying Lemur kubathandi bendalo.
Igama lesiMalay elithi "Teratak" lisetyenziselwa ukuchaza indawo yokuhlala yethutyana kwigadi yeziqhamo kunye negama elithi "Damai" ngesiMalay lithetha "Uxolo".
I-DAMAI VILLA, indlu yethu yokwenyani eneminyaka eyi-130 yamaFama aseMalay ekwizibonda, ilala ubuninzi babantu abadala aba-6 ngokukhululeka.
Le Ndlu ipholileyo (i-850sq ft) yesiNtu yamaFama eMalay enamagumbi agcweleyo kunye ne-WiFi yasimahla, ipholile, ingena umoya opholileyo ovuthuza ngeefestile zegumbi lokulala ayifuni moya-moya. Ilungele ukuba usapho lubaleke okanye luhambe nabahlobo, inebhedi eyi-queen eyi-1, indlu yangasese yangoku, ishawari eshushu, itafile yokutyela ye6, iveranda evulekileyo yeveranda, izinto zasekhitshini, isitovu segesi esiphindwe kabini sokupheka, iketile yombane, itoaster. , ifriji, ikofu & neti.
Ivenkile enkulu yaseKedawang kunye neSupermarket yaseCenang apho unokufumana khona iimpahla zakho ezomileyo, iCemara Pharmacy Langkawi kunye neLaundry yelali kukumgama wemizuzu emi-5 ukuya kweli-10 ngebhayisekile.
Kwabo bafuna ukuzama ukutya kwendawo, kukho iiwarungs ezininzi okanye iindawo zokutya zasekhaya ecaleni kweJalan Kedawang emva kwe-PETRONAS yepetroli kunye neJalan Kuala Muda emva kweBon Ton.
Kukwakho iMarike yasebusuku rhoqo ngoLwesibini ebusuku kunye ne-assortment emibalabala yokutya kwasekhaya kunye neempahla ezikumgama we-5-10 imizuzu ngebhayisekile ecaleni kweJalan Kedawang.
Thatha uhambo okanye umjikelo (sineebhayisekile ezi-2 ezikhoyo nceda uqaphele ukuba iibhayisekile zethu azinazibane) kwiindlela zelali ezinoxolo, thatha inxaxheba kwimisebenzi emininzi yendalo ekhoyo kwesi siqithi, funda ukudlala isiginci, ukuphulula umzimba okanye ukungqengqa. ebhedini, yonwabele impepho kwaye uvumele i-coo epholileyo yamahobe enkuni ukuba akulalise.
Ukuba sisiqithi seTropiki esijikelezwe yindalo engakhange ichukunyiswe kunye ne-Geopark iNdawo yeLifa le-UNESCO, i-geckos, iingcongconi kunye nezinambuzane ziyinyani yobomi kwisiqithi.
Sijonge ukukunika ixesha kunye nendawo yokuphelisa uxinzelelo, phila ubomi obuncinci kwindawo apho kukho indawo yokuphefumla kunye nokuvumela indawo engqongileyo ukuba ithobe umphefumlo wakho. I-TERATAK DAMAI LANGKAWI yindawo yokuba wedwa kunye nokuphumla.
Ithala leencwadi elincinane elibolekayo elinecandelo leencwadi kunye neencwadana ezinemifanekiso kwiMalaysian & Langkawi flora & fauna, iindawo ezinika umdla, imbali kunye nenkcubeko ziyafumaneka onazo ngaphakathi "Rumah Ibu" okanye Main House.
Iingcango zethu eRumah Ibu zivulwa ngo-10am-7pm. Ukuba ufuna ulwazi, uncedo okanye uncedo, ungasoloko undifumana eRumah Ibu okanye undishiyele umyalezo kwibhodi yethu yonxibelelwano yakwa-Airbnb.
Sinikezela ngenkonzo yokudlulisa kwisikhululo seenqwelomoya ekufikeni kwakho. Nceda unike iinkcukacha zokufika (inombolo yenqwelomoya kunye nexesha lokufika) ukuze uthathwe.
Ibhaskithi yesidlo sakusasa esiQhelekileyo esineziqhamo ezitsha zamaxesha onyaka, ilofu yesonka e-1, ishumi elinesibini lamaqanda kunye nebhotile yokuqala ye-1.5 litre yamanzi amaminerali alindelweyo ekufikeni kwakho. Kukho ibhotolo, ijam kunye nemarmalade efrijini.
Ufika njani e-LANGKAWI usuka KUALA LUMPUR (Indiza)
Kukho malunga ne-15 leenqwelomoya zemihla ngemihla eziya eLangkawi zisuka eKuala Lumpur ngeenqwelomoya ezi-3 eziphambili:- I-Malaysia Airlines (isuka e-KLIA), i-AirAsia (isuka e-KLIA2) kunye neMalindo kunye ne-Firefly (isuka kwisikhululo seenqwelomoya saseSubang). Ungajonga kwi-intanethi ngeenqwelomoya, amaxabiso kunye nokubhukisha.
Ufika njani e-LANGKAWI usuka e-KUALA PERLIS (iFerry yabakhweli)
Ukukhwela isikhitshane ukuya eLangkawi ukusuka eKuala Perlis kuthatha imizuzu engama-45 @ RM18 ngomntu ngendlela enye.
ISHEDYULI YEFERRY ukuya eLANGKAWI isuka KUALA PERLIS
7am, 8.15am, 9.30am, 10.45am, 12noon, 1.30pm, 3pm, 4.30pm, 6pm,7pm (inqanawa yokugqibela)
Ufika njani eLANGKAWI usuka ePENANG
Isikhephe esisuka ePenang sihamba yonke imihla sisiya eLangkawi ngo-8.15am nange-8.30am ngokulandelelanayo. (Ukukhwela kuthatha malunga ne-2hours 45minutes).
Iindwendwe zinokufikelela kumabala kunye nenxalenye engaphambili yeRumah Ibu (indlu enkulu) apho ithala leencwadi libolekayo.
Inxalenye engasemva yeRumah Ibu (indlu enkulu) kunye negadi engasemva yeyosapho kuphela.
Sihlala kwilali ebukekayo esebenzayo engqongwe ngamasimi epaddy. Uya kudibana neentaka ezininzi ezifudukayo, izilwanyana zasendle kunye nemfuyo. Iikingfisher, amaxhalanga, iimpondo zenkomo ngamaxesha athile, ii-coucals, i-elusive nocturnal colugo (flying lemur), ukujonga amacilikishe kunye neenyathi zamanzi ukukhankanya ezimbalwa. Uya kudibana nabantwana bedlala iikayiti zesiNtu ngexesha lokuvuna (elishushu & elomileyo), beloba kumasimi erayisi, abalimi benyamekela izityalo zabo nabalobi belungisa iminatha yabo.
Akukho zithuthi zikawonke-wonke eLangkawi ngaphandle kweTeksi & GRAB. (Amaxabiso eteksi anikezelwe kwigumbi lakho)
Eyona ndlela ifikelelekayo yokujikeleza esi siqithi kukuqesha imoto okanye isithuthuthu. Nceda ungalibali ukuza nelayisenisi yakho yokuqhuba.
I-GRAB iyafumaneka nakwisiqithi.
UKURENTWA KWEMOTO kuphakathi kwe-RM90-120/ngosuku (kuxhomekeke kwimanuwali okanye kwimoto)
I-SCOOTER ERENTWAYO iphakathi kwe-RM30-45/ngosuku
Amaxabiso epetroli eMalaysia yi-R2.30/litha.
Ezinye Izinto Emaziqatshelwe
Nceda ugcwalise iProfayile yakho ye-AIRBNB (ubuncinane qinisekisa i-imeyile & nenombolo yoqhagamshelwano). Siya ngokuzenzekelayo DECLINE iindwendwe ezineprofayile ezingenanto.
Wakuba ukuqinisekisile ukubhukisha kwakho kwa-Airbnb, kubalulekile ukuba usithumelele umyalezo kwangethuba usuku.
UMZEKELO : 1) Umhla wokufika/i-ETA/Inombolo yeFlight
2) Umhla wokuhamba/ETD
Kukho indawo yokuhlamba impahla yalapha elalini (malunga ne-5minutes yokukhwela ibhayisekile kude nendawo yethu) eya kuhlamba, yomise kwaye isonge impahla yakho nge-RM3.50per kilo.
Kukho indawo yokuthengisela yasekhaya evula mihla le ngentsimbi yesi-6 ekuseni ithengisa isidlo sasekhaya / sesintu esimnandi kunye nesidlo sakusasa esimnandi kunye nexesha leti elenziwe ngabafazi kwilali yethu ngaphakathi kwemizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka endlwini.
1 ibhedi elala abantu ababini, 1 iisofa eziyi-, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
Ukuzola, idyllic & rustic ejikeleze umntla weMalay Kampong (Ilali). Ukubona iinyathi zamanzi kunye neenkomo zizula-zula, abantwana abadlala ngeWau yesintu (ikhayithi), abalimi benyamekela izityalo zabo, iintaka ezifudukayo emithini namasimi erayisi, umnxeba osuka kude womthandazo osuka kwi-mosque ngorhatya & nemithi yekhokhonathi eshukunyiswa yimpepho epholileyo. .
Sihlala kwindawo kwaye njengoko ababuki zindwendwe bakhona ukuba ufuna uncedo. Nceda undithumelele umyalezo kwi-AIRBNB ukuba ufuna uncedo kwaye undithumelele umyalezo kwangethuba ukuba ufuna uncedo lokuququzelela nantoni na njengoko ndihamba ndisenza imisebenzi emininzi iintsuku ezininzi.
Sihlala kwindawo kwaye njengoko ababuki zindwendwe bakhona ukuba ufuna uncedo. Nceda undithumelele umyalezo kwi-AIRBNB ukuba ufuna uncedo kwaye undithumelele umyalezo kwangethuba u…